नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रवि लामिछाने, युबराज र उर्लिएको जनलहर सत्य थिए, अदालतले सफाइ दियो, न्याय दियो । खुशी लाग्यो ! बधाई रविजी र सम्बध्द सबैलाई !
रवि लामिछाने, युबराज र उर्लिएको जनलहर सत्य थिए, अदालतले सफाइ दियो, न्याय दियो । खुशी लाग्यो ! बधाई रविजी र सम्बध्द सबैलाई !
चितवन जिल्ला अदालतको फैसला पछि प्रचण्डका बाबुछोरी र उनका शिशुपाल प्रहरी उपरिक्षक दान बहादुर र रवि, युबराजलाई फसाउन चाहने बिरोधिहरुलाई ठुलो चोट पुगेको महसुस गरिएको छ । उनिहरु अब रवि बिरुद्ध पुनराबेदन जाने सम्भावना पनि रहेको रेणु निकट श्रोतले जनायो ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहितका तिनै जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले लामिछानेसहित तीनै जनाविरुद्ध अधिकत्तम ५ वर्षसम्म कैद र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरेको थियो ।
तर, जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश हेमन्त रावलेको इजलाशले भने पुडासैनीको उक्त भिडियोलाई नै अन्तिम सत्य र अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको खबर हबले लेखेको छ ।